उर्मिला पोखरेलका केही मुक्तकहरूः | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका उर्मिला पोखरेलका केही मुक्तकहरूः – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
उर्मिला पोखरेलका केही मुक्तकहरूः
तस्करी, भ्रस्टाचार, माफियाहरू सँग झुकेको छ सरकार !
जनताको खुसी र हितमा काम गर्न चुकेको छ सरकार !!
महङ्गि बेरोजगारी हटार्इ सुशासन कायम गर्छु भन्थ्यो,
आर्थिक विकास बिना कर बढ्दा मन दुखेको छ सरकार !!
धेरै पछि आज अति आत्मिय मित्र भेटिए!
तिर्सना र झल्को अलिबारका लागि मेटिए!!
कस्तो अचम्मको नाता हुन्छ मित्राताको;
साथीलाई भेटी पछी तनाबका गला रेटिए!!
दु:खमा पाइन्न साथ कसैको
भोकमा पाइन्न गाँस कसैको
जस्तो परेपनी सहने आफैले रैछ
त्यसैले कहिले गरिन्न आश कसैको ।
विनाशकारी भुकम्प र बाढीले ल्यायो कालो रात,
यी दुखी जनताहरूलाई खै नेताहरूको साथ ?
बजेट ल्याएर आ-आफ्नो पार्टी मै भागवन्डा हुँदा,
गरीव, निमुखा र पीडित सबैको भयो खाली हात ?
धेरै पछि आज अति आत्मिय मित्र भेटिए !
तिर्सना र झल्को अलिबारका लागि मेटिए !!
कस्तो अचम्मको नाता हुन्छ मित्राताको !
साथीलाई भेटेपछि तनावका गला रेटिए !!
अकबरेमा भन्दा मरिचमा नै धेरै राग देखें !
कालोमा भन्दा गोरोमा नै धेरै दाग देखें !!
देशको ढुकुटीमा अति नै रजाइँ गर्नेहरूमा,
राणा,शाह भन्दा गणतन्त्रे नै धेरै खराव देखें !!
जन्मनु र मर्नु संसारको हो है ~ रित !
सबै संग मिठो बोल्दै लगाउ है~प्रित !!
बाचुन्जेल संघर्ष गर्नै पर्ने जिन्दगीमा,
जीवनका भोगाइलाई नै बनाउ है~गीत !
नेपाल आमाका सपूत छोरा हुन पत्रकार रवि !
निस्वार्थ, सच्चा, इमानदर छ है उनको छवि !!
सबै जनले ज्ञान, शिक्षा लिए हुन्छ उनै सँग !
पीडितलाई न्याए दिलाउने बनिसक्यो हब्बी !!
(Hobby – हब्बी: शौख
This entry was posted in कविता, टुक्रे कविता, मुक्तक and tagged Pallawa, Pokharel, Urmila, उर्मिला पोखरेल, पल्लव. Bookmark the permalink.
← ‘आकाश सोंच’